ओली र प्रचण्डबीच ‘लेटर बम’ आदान–प्रदान – Nilo Aakash
निलो आकाश संवाददाता २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १७:४५
नेकपामा पार्टी बैठक, समूहगत छलफल र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममै एक–अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप सामान्य थियो । तर, पछिल्लो विवादमा शीर्ष नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप लिखित रूपमै पेस भएका छन् । सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य (वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ)ले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले २५ कात्तिकमा लिखित रूपमै जवाफ दिए । ओलीले आफूमाथि निसाना लगाएर जवाफ लेखेपछि प्रचण्डले २८ कात्तिकमा फेरि ओलीलाई जवाफी पत्र लेखेका थिए ।
तीनवटा पत्रका सवाल–जवाफ यस्ता छन्
५. ओलीको सवाल : कूटनीतिक क्षेत्रमा जाने अनिच्छा रहेको युवराज खतिवडाले बताउँदा–बताउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि राजदूतका लागि प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यतिकै बिदा दिन उपयुक्त नहुने भन्दै मुख्यसचिवलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिसमा पनि सहमति भयो । यो तथ्यले सल्लाह भएन भन्ने कसरी पुष्टि हुन्छ ?
प्रचण्डको जवाफ : राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा छलफल अवश्य भएको हो, तर सबै कुरा मिलेको पनि होइन । मुख्य कुरा राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि स्थायी कमिटीको मर्म र भावनाअनुसार एकपटक सचिवालयमा परामर्श, छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइमा ‘हुन्छ’ भनेर ओलीले सहमति जनाए । तर, म बालुवाटारबाट निस्किएपछि त्यसै दिनको क्याबिनेटबाट मलाई पनि थाहा नदिईकन राजदूत नियुक्ति गरियो । अहिले पत्रमा सबै कुरालाई सल्लाहले गरेको हुँ भन्नु दिउँसै रात पार्ने जाली कुरा भएन र कमरेड ?
६. ओलीको सवाल : केही दिनको कचपच, एकखाले सहमति, त्यसको दुई–चार दिनपछि फेरि उही कचपच….को शृंखलामा हामी कहिलेदेखि छौँ र कहिलेसम्म रहने ? यो तमासाबाट कमरेडहरू आजित हुनुभएको छैन ? देश, जनता र समग्र पार्टीपंक्तिले हामीबाट गरेको अपेक्षा यही हो ?
प्रचण्डको जवाफ : पार्टी एकताको वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक आधारमाथि प्रहार गर्ने तपाईं अनि यसो नगरौँ भनेर आग्रह गर्ने म सधैँको कचकचे हुने ? यो तपाईंको दृष्टिदोषको समस्या हो भनेर किन नभन्ने ?
७. ओलीको सवाल : क्रियाशील र क्षमतावान नयाँ पुस्ताले म त्यो पदमा बसेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्छु भन्ने मौका नपाउने, बुढाहरू यसरी लड्ने कि नेतृत्वको दोस्रो पंक्तिले समेत भो लडाइँ–झगडा नगरिदिनुस्, मिलेर तपाईंहरू नै खानोस् भनेर झगडा मिलाउनमै हरदम व्यस्त हुनुपर्ने यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण खेलको अभ्यास यहीँ अन्त्य गरौँ र आ–आफ्ना काममा जुटौँ । आँट गरौँ, अब आउने औपचारिक फोरमबाट नयाँलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर पार्टी, आन्दोलन, देश र जनतालाई गुण लगाऔँ । भइसकेका र पाकाहरूले लोभ नगरी हानथाप नगरौँ, लाञ्छना र दाउपेचको फोहोरी खेल छाडौँ । ३०–३५ वर्षदेखि हातमा डाडु–पन्यु लिएर आफू र आफ्नालाई पोसिरहने, कोही भान्सामा पस्न त के हेर्नसम्म्म नपाउने परिपाटी अन्त्य गरौँ ।
प्रचण्डको जवाफ : तपाईंले नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने आदर्शका कुरा पत्रमा लेख्नुभएको छ, तर व्यवहारमा भने यदि कसैले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेमा त्यो सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले भने पनि आफूले नमान्ने कुरा खुला रूपमा गरिरहनुभएको छ । विघटन भइसकेको पार्टीको महाधिवेशनले छानेका अध्यक्ष हुनाले मलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने अनौठो तर्क गर्नुहुन्छ । पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने चर्चा पनि आइरहन्छ, यो के हो कमरेड ? यो फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने कुरा हो कि ? संकटकाल लगाएर जान्छु भन्ने हो कि ? सदन विघटन गर्ने कुरा हो कि ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
८. ओलीको सवाल : प्रचण्डले मलाई वेलावेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ– मलाई फकाउनुस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि । कसरी केभन्दा फकिनुहुन्छ ? मुलुकको समृद्धिका लागि, जनताको खुसियालीका लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगतिका लागि, पार्टीलाई थप सुदृढ गर्नका लागि म फकाउन तयार छु । ल मैले फेरि फकाएँ । आउनुस्, गुटबन्दी र दाउपेच छाडौँ, हाम्रो यो प्यारो पार्टीलाई एकजुट बनाऔँ ।
प्रचण्डको जवाफ : पार्टी एकताको रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा म आज पनि उत्तिकै दृढ छु । मैले खुला र स्पष्ट वैचारिक, राजनीतिक छलफलको तपाईंको प्रस्तावलाई स्वागत गर्नुको अर्थ पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने नयाँ आधारको खोजी गर्नु नै हो । आवेगमा आएर पार्टी एकता, संविधान र परिवर्तनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुनै काम तपाईंबाट हुनेछैन भन्ने आशा र विश्वास गर्दछु । नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्दै देश, जनता, पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ उचाइतिर लैजानु छ । एकता–संघर्ष–रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि थोरै मात्र आत्मसमीक्षा, आत्मालोचना र त्यागको स्पिरिट देखाउनुभयो भने त्यो ठूलो कुरा हुनेछ । मेरो विचारमा यो सबैका निमित्त थोरै त्याग गर्ने पालो तपाईंको छ । यत्ति भएमा तपाईंले पत्रको अन्तिममा भनेझैँ म सजिलै फर्किनेछु ।
९. ओलीको सवाल : आरोपित गर्न त सकिएला, बर्दिबासदेखि पर्सासम्मका घटना हेरौँ, शपथग्रहणका वेला भेला भएका आफ्नै कार्यकर्ताबीच मुठभेड गराएर, मारामारी गराएर हामीले चाहेको मनपेट मिलेको एकताबद्ध पार्टी बन्छ ? यी घटनामा कहाँ हुनुहुन्छ ? मैले भनिरहनुपर्छ ?
प्रचण्डको जवाफ : बर्दिबास र पर्सा घटनाको उल्लेख यसरी गर्नुभएको छ कि त्यहाँ मैले नै मारामारी गराउन चाहेको हो । योभन्दा ठूलो झुट के हुन सक्छ । मुकेश चौरसियाको हत्याको विषयमा जाहेरी दर्ता गर्ने सन्दर्भमा देखिएको जात्रा सबैलाई थाहा छ । यो दोषीले झन् चर्को स्वरमा आफ्नो दोष लुकाउन खोजेको अर्थ लाग्दैन र ?
१०. ओलीको सवाल : हिजो हामी कोही जनयुद्धको बाटो हिँड्यौँ होला, कोही जबजको । तर, आज हामीले हिँडिरहेको बाटो कुन हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनु र स्पष्टताका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । वैचारिक छलफलको विषयलाई बराल्ने, विषयान्तर गर्ने र त्यसैलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने तरिका ठीक होइन । त्यसलाई खुला छलफल गरौँ । त्यसो गर्नुअघि पार्टी एकीकरणका काम सम्पन्न गरौँ ।
प्रचण्डको जवाफ : मैले तपाईंसँग छलफलमा होस् वा कमिटीका बैठकमा सधैँ नै खुला र पारदर्शी वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक छलफलको आग्रह गर्दै आएको छु । यस सन्दर्भमा तपाईंको यो लामो पत्रले अब पार्टीमा स्पष्ट र खुला वैचारिक छलफल हुनेछ र विधिसंगत ढंगले लिइने पार्टीका निर्णयहरू सबैले मानेर जाने वातावरण बन्नेछ भन्ने आशा लिएको छु । मलाई गहिरो गरी लाग्ने गरेको छ कि आज पार्टीका अगाडि देखापरेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण वैचारिक–राजनीतिक विषयमा खुला र स्पष्ट छलफलको अभाव, कमिटीहरूको नियमित बैठक र सामूहिक निर्णय एवं व्यक्तिगत जिम्मेवारीको वैज्ञानिक मान्यताबाट विचलित हुनु हो ।nayapatrikadaily